पूर्वको लेनिनग्रादमा बाजी मार्दै कन्हैया कुमार !| Nepal Pati
पूर्वको लेनिनग्रादमा बाजी मार्दै कन्हैया कुमार !
एजेन्सी । पूर्वको लेनिनग्राद नामले चर्चित बिहारको बेगूसराय जिल्ला भारतीय राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहँदै आएको छ ।सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा जेएनयू छात्रसंघका अध्यक्ष कन्हैया कुमारले बेगूसराय जिल्लाको संसदीय क्षेत्रमा नामांकन पत्र भरेसंगै चर्चाको शिखरमा रहँदै आएको छ।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको टिकटमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका कन्हैया कुमारका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी केन्द्रिय सरकारका मन्त्री गिरिराज सिंह रहेका छन् । भूमिहार जातीका नेताहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएसँगै सर्वसाधारण मानिस मात्र होइन भारतीय राजनीति नै बेगूसरायमा ध्यान दिन बाध्य भएको छ । सन् २०१९ को निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा रहेको भाकपा कन्हैया कुमारको राजिनितीमा प्रवेशसँगै बिजेपीको निम्ती फलामको चिउरा बन्ने आँकलन मिडियाहरुले गरिरहेका छन् ।
बेगूसराय जिल्लाको उक्त लोकसभा क्षेत्रमा उन्नाइस लाख मतदाता रहेका छन् । जसमा भूमिहार जातीका १९ प्रतिशत, मुस्लिम १५ प्रतिशत, यादव १२ प्रतिशत, कुर्मी ७ प्रतिशत र बाकी अन्य जातीका मानिसहरु रहेका छन् । बेगूसरायका वरिष्ठ पत्रकार श्यामा चरण मिश्रको भनाइ अनुसार गिरिराज सिंहको भूमिहार, कुर्मी र अति पिछडिएका वर्गमा राम्रो पकड रहेको छ । त्यसै गरि राष्ट्रिय जनता दलको मुस्लिम , यादव, र पिछडिएको वर्गमा राम्रो पकड रहेको समयमा राजदले आफ्नो उम्मदेवार खडा नगरेको कारण कन्हैया कुमारतर्फ तराजु ढल्कने जनाइएको छ ।
चौथो चरण अन्तरगत २९ अप्रिलमा मतदान हुने उक्त क्षेत्रमा भाजपाले सबै शक्ती प्रयोग गर्दा पनि कन्हैया कुमार अगाडि देखिएपछी गिरिराज सिंह तिल्मिलाएको भारतीय अखबारले जनाएका छन् ।
को हुन् कन्हैया कुमार?
कन्हैया कुमारको जन्म बिहारको बेगूसराय जिल्लाको एक गाउँमा भएको थियो ।
उनका पिता जयशंकर सिंह प्यारालाइसिसका बिरामी रहँदै आएका छन् । माता मिनादेवीको सामान्य कमाइले अध्ययनको निम्ति पटना देखि जेएनयू सम्म पुगे । जेएनयूमा पीएचडी गरिरहेकै समय राष्टद्रोहको आरोप खेपेका उनी जमानतमा छुटेसँगै मिडिया सेलीब्रेटी बन्न सफल भएका छन् ।
सन् २०१५ मा अल इन्डिया स्टुडेन्ट फेडेरेसनको सदस्य बन्दै जेएनयू छात्रसंघको अध्यक्ष बन्न सफल भए । अत्यन्त लोकप्रिय वक्ता रहेका कन्हैया कुमार भारतीय राजनीतिमा नयाँ सम्भावना बोकेर उदाएका छन् ।
बलिवुड प्रोड्युसर एवं एक्टर कमाल खानले कन्हैया कुमारको समर्थनमा ट्विट गर्दै भनेका छन्, ” कन्हैया कुमार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जे गरिरहेका छन्, सहि गरिरहेका छन् । किनकी भक्तहरुलाई उनीहरुकै भाषामा जवाफ दिनु जरुरी हुन्छ ।साथै अरुले पनि यसैगरी जवाफ दिन जरुरी छ ।”
चायवालाले हाँकेको देश यदि पीएचडी वालाको हातमा पर्यो भने भारतीय दुखी जनताको मुक्ती मिल्नेछ भन्दै निर्वाचन र्यालीमा युवायुवतीहरु फिल्मी शैलीको गीतमा झुमिरहेका छन् ।
कन्हैया कुमारको चुनावी गीत,
लक्ष्मी नारायण जगतका श्रृष्टिका जन्मदाता लीलारूपी...